Ntụgharị uche nke isi uche - Ọgụgụ ọgụgụ isi n'ịntanetị
Isi ihe omimi nwere, nke kachasị, Psychics kachasị mma mụ na ya kwurịtara. Ha bụ otu n'ime ọrụ ochie, nke a kacha akwanyere ùgwù na azụmaahịa. Onye ọ bụla nwere ọgụgụ isi na-anwale ule na asambodo siri ike tupu Isi mmalite uche ga-enye ha ohere ịgụ ya. Ndi uche ha nwere otutu ihe akaebe nke ndi ahia juru ha, obughi ihe ijuanya. Ha na-enye ọgụgụ ọgụgụ ziri ezi mgbe niile ma ọ dịtụghị mgbe ọ dị m ka a na-edozi m maka ojoro. Na-akwụ ụgwọ tupu ị gụọ ka ị ghara ibo ebubo mberede. Psychics na Isi mmalite nke psychic kwesịrị ịlele. Ihe karịrị afọ 25 gara aga Isi mmalite nke mmụọ sitere na ekwentị wepụta akwụkwọ ọgụgụ isi mbụ ya. Ugbu a, ha na-enye ekwentị, nkata ozi ozugbo na agụ email. Isi mmalite nke Psychic agbakwunyela atụmatụ ederede ọhụụ nke na-enye gị ohere ịde nọmba 1800 ma soro onye nnọchi anya gị nwee mmekọrịta! Gbalịa ya, ziga ozi na 866-326-0193 ederede (ọnụego ozi ederede gị ga-etinye nke ọma).
Ndị na-agụ akwụkwọ ọgụgụ isi ha bụ ihe mere ka ha dị iche. Ha emeela usoro nyocha siri ike gụnyere ajụjụ ọnụ na ịgụ akwụkwọ nyocha. Onye ọ bụla na-achọ ịgụ akwụkwọ ga-enwerịrị nnwale ule ma kwado ya site na otu n'ime ndị ọkachamara ha gosipụtara. Okwu ochie ahụ "Ọ na-ewe mmadụ iji mara otu" bụ eziokwu ma a bịa n'ịchọpụta ndị maara mmụọ maara ihe nke ọma nwere ike iwepụta ọgụgụ bara uru.
Isi ihe omimi enwere usoro nyocha kachasị ọgụgụ isi kachasị mma nke ọrụ psychic niile m jirila. A na-ekwe ka 1 si na 20 psychics na-emetụta Isi Iche na-enye ọgụgụ isi na ọrụ ahụ. Usoro nyocha ahụ siri ike ma na-agụnye nlele azụ, ọtụtụ ajụjụ ọnụ, ha ga-enwerịrị ọgụgụ isi ọgụgụ isi na onye na-agụ akwụkwọ ọgụgụ isi ugbu a na-anwale ikike ha. N'ihi usoro a, ị nwere ike ịkwado naanị ọmarịcha Psychics na-arụ ọrụ ebe ahụ.
Isi ihe omimi na-adịbeghị anya emelitere weebụsaịtị ha ma enwere m mmasị na ya. Ọ dị oke mfe iji, ma ị nwere ike ịchọ aha psychics site na aha, ma ọ bụ ndọtị ekwentị. Ọ bụrụ na ịmaghị onye mmụọ ịhọrọ ya ị nwere ike ịhazi listi ahụ site na ikike ọgụgụ isi ha, ma ha enwere ike ịkpọ oku ma ọ bụ na ha enweghị ịkpọ oku, ọkwa ndị ahịa na ndị ọzọ. Isi mmalite nke uche na-enye ndị ahịa ohere ịhapụ nkọwa na ọkwa ka ị wee hụ otú ndị ahịa ndị ọzọ si enwe mmasị ịgụ ha.
Ọrụ ndị ahịa bụ ebe Isi ihe omimi n'ezie outdo onye ọ bụla ọzọ. Isi mmalite nke isi uche na-amalite site na ịnye Nkwenye Afọ Ojuju 100%. Nkwenye ahụ na-ekwu ma ọ bụrụ na afọchaghị onye na-agụ akwụkwọ ọgụgụ isi gị, ma ọ bụ ọgụgụ ha nyere gị naanị ịkpọ ha ma ha ga-enye gị nkwụghachi zuru ezu ma ọ bụ nyere gị aka ịchọta onye ọgụgụ isi ka mma. Ha na-enye ekwentị na nkwado email elekere 24 kwa ụbọchị, ụbọchị asaa n'izu. Nkwado ndị ahịa ha sitere na USA, achọpụtara m na ọ bụghị naanị na ha nwere ezigbo nsọpụrụ ma nwee nsọpụrụ mana ha lekọtara obere ihe m nwere anya wee rụsie ọrụ ike iji mee m obi ụtọ. Ha maara oke ihe banyere Psychics ma tụnye aro ole na ole ndị gụrụ akwụkwọ ka ha gbalịa. Ọ bụrụ na nke a bụ akwụkwọ ọgụgụ isi mbụ gị nwere ike ịchebe gị oge dị ukwuu na-anwa ịhọrọ ezigbo agụ.